Cars (2006) – Channel Myanmar
IMDB: 7.1/10 294,200 votes
အခုမိတျဆကျပေးမယျ့ဇာတျကားလေးကတော့ ၂၀၀၆ ခုနှဈထှကျ IMDB rating 7.1/10 ရထားတဲ့ animation ဇာတျကားကောငျးလေးတဈကားပါ။
ဒီဇာတျကားထဲမှာဆိုရငျLightning McQueen ဆိုတဲ့ပွိုငျကားလေးဟာကယျလီဖိုးနီးယားမှာပွိုငျမယျ့ပစ်စတငျဖလားပွိုငျပှဲကိုသှားတဲ့လမျးက Radiator Springs ဆိုတဲ့မွို့ငယျလေးရဲ့လမျးမကိုမတျောတဆပကျြဆီးအောငျလုပျမိသှားပွီးတော့ပွနျလညျပွငျဆငျဖို့အတှကျအပွဈပေးခံရပါတယျ။
သူဟာ Radiator Springs ဆိုတဲ့မွို့လေးမှာဘယျလိုတှကွေိုးစားပွီးတော့ ပွိုငျပှဲမှာအနိုငျရရှိမလဲဆိုတာတော့စိတျဝငျစားဖှယျတှမွေ့ငျရမှာဖွဈပါတယျ။
အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ထွက် IMDB rating 7.1/10 ရထားတဲ့ animation ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင်Lightning McQueen ဆိုတဲ့ပြိုင်ကားလေးဟာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာပြိုင်မယ့်ပစ္စတင်ဖလားပြိုင်ပွဲကိုသွားတဲ့လမ်းက Radiator Springs ဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးရဲ့လမ်းမကိုမတော်တဆပျက်ဆီးအောင်လုပ်မိသွားပြီးတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အပြစ်ပေးခံရပါတယ်။
သူဟာ Radiator Springs ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာဘယ်လိုတွေကြိုးစားပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
File Size : (852 MB)
Source : 1080p BluRay x264-CiNEFiLE
Subtitle by Kyaw Lwin Tun
Adrian Ochoa Andrew Stanton Billy Crystal Bob Costas Bonnie Hunt Cheech Marin Dale Earnhardt Jr. Darrell Waltrip Dave Foley Douglas Keever E.J. Holowicki Edie McClurg Elissa Knight George Carlin Guido Quaroni Humpy Wheeler Jay Leno Jenifer Lewis Jeremy Clarkson Jeremy Piven Joe Ranft John Goodman John Ratzenberger Jonas Rivera Katherine Helmond Larry Benton Larry the Cable Guy Lindsey Collins Lou Romano Lynda Petty Mario Andretti Michael Keaton Michael Schumacher Michael Wallis Mike Nelson Owen Wilson Paul Dooley Paul Newman Ray Magliozzi Richard Kind Richard Petty Sarah Clark Sherry Lynn Tim Allen Tom Hanks Tom Magliozzi Tony Shalhoub Vanness Wu
Option 1 usersdrive.com 852 MB Blu-ray 720p
Option2yoteshinportal.cc 852 MB Blu-ray 720p
Option3yuudrive.me 852 MB Blu-ray 720p
Option4megaup.net 852 MB Blu-ray 720p
Option5mega.nz 852 MB Blu-ray 720p
Option6upstream.to 852 MB Blu-ray 720p
Party Central (2014) 2014
Bling (2016) 2016
Rudolf the Black Cat (2016) 2016
Scooby-Doo! Return to Zombie Island (2019) 2019
Barbie: Star Light Adventure (2016) 2016
Ploey: You Never Fly Alone (2018) 2018
Howl’s Moving Castle (2004) 2004